Maxkamaha Yemen oo xukuno dil iyo xarig ku riday rag lagu eedeeyay burcad badeednimo.
Loading...	Home Wararka Maxkamaha Yemen oo xukuno dil iyo xarig ku riday rag lagu eedeeyay burcad badeednimo.
Maxkamaha Yemen oo xukuno dil iyo xarig ku riday rag lagu eedeeyay burcad badeednimo.	Friday, 28 May 2010 08:11	Maxkamadaha dalka Yemen ayaa dardar galiyay howlaha ay ku maxkamadeenayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu eedeenayo in ay katirsan yihiin Kooxaha Burcad badeeda Soomaalida.
Ku xigeenka Qunsulka Soomaalida ah ee magaalada Cadan Xuseen Xaaji Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay Xukuno kala duwan oo Maxkamadaha dalka Yemen ay ku direen rag lagu eedeeyay in ay yihiin Kooxo Burcad badeed Soomaalida ah kuwaasi oo isugu jira Dil iyo Xabsi sanado ah.
Waxa uu sheegay in raga la xukumay ay ka koobnaayeen 3-qeybood oo uu sheegay in kooxdii ugu horaysay ay ahaayeen 12-qof kuwaasi oo weeraray Markab laga leeyahay dalka Yemen islamarkaana ay ku dileen 2-qof 4-kalana ay ku dhaawaceen, waxaana uu sheegay in 12-kaasi qof 6-kamid ah lagu xukumay dil halka 6-da kalana lagu xukumay Xabsi 10-sano ah.
Waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in qeybtii 2-aad ay ahaayeen 10-Burcad badeed ah kuwaasi oo Ciidamada Ruushka ay ka soo qabteen xeebaha dalka Soomaaliya islamarkaana ay u gacan galiyeen Ciidamada dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay in ragaasi lagu xukumay min 10-sano oo Xariga ah.
Qeybtii ugu dambaysay ayuu sheegay in maalinimadii shalay Ciidamada Hindiya ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ay u gacan galiyeen dowladda Yemen kuwaasi oo iyaguna uu sheegay in lagu xakumay min 5-sano oo xarig ah, waxaana uu tibaaxay in marka la isu geeyo raga la xukumay ay gaarayaan 34-qofood oo lagu eedeenayo Burcad badeednimo.